जसपा Archives - Pardeshi Khabar
हिन्दु मन्दिरलाई करोडौ बजेट छुटाउने र आदिवासीहरुको धरोहर खुवालुङ ध्वस्त बनाउने बजेट एकल जातिवादीहरुको संकीर्ण सोचको पराकाष्ठा हो यो । नेपालका मै हुँ भनेर कुर्लने जातिवादी बाहुन पत्रकारहरु अनी मै हुँ भनेर कुर्लने बाहुन विद्धवानहरू किन चुप छन् । के पशुपतिलाई गरीव जनताको पैसा लुटेर ३५ करोड बजेट छुटाउनु उचित थियो? बोलन कथित बिद्धानहरू? बोलनहौ जातिवादी कथित मै हूँ भन्ने मिडीयाहरू? पशुपती कोषको करोडौ पैसा प्रकारन्तरले आफैमा निरर्थक रूपमा भारत पुरयाउने कार्य भई रहेको छ । जातिबादी पार्टीमा बसेर एमाले हाम्रो घर हो भनेर रमाउने त्यतिका धेरै आदिबासीहरूको बिरोध गर्नेफुर्सदमा